Vivo Y3 Standard Edition: Tilmaamaha, Qiimaha iyo Siidaynta | Androidsis
Vivo waxay nooga tegeysaa taleefano badan bilooyinkan. Usbuuc ka hor U3 wuxuu ahaa taleefankii la soo bandhigay, inta u dhexeysa. Hadda shirkaddu waxay nooga tagtay moodel ka mid ah inta laga soo galayo. Shirkaddu waxay nooga tagaysaa Vivo Y3 Standard Edition. Waa nooc qayb ahaan ka dhashay Vivo Y3, laakiin leh isbeddelo.
Ahaanshaha taleefan ahaan inta u dhexeysa, waxaan arki karnaa taas Waxay nooga tegayaan tusaale xoogaa lagu hagaajiyay xagga qeexitaanka. Laakiin tani waxay ka caawineysaa inaan ka filan karno qiimo jaban Vivo Y3 Standard Edition. Nasiib wanaag, waxaan horey u ogaanay dhammaan faahfaahinta ku saabsan qalabkan.
Naqshadeynta kuma helno lama filaan badan sidoo kale. Shaashad leh heer sare oo ah dhibic biyo ah, oo leh naqshad badan oo oval ah kiiskan. Wareegyada dhinacyadu aad ayey u khafiifsan yihiin, si wanaagsan loogu isticmaalo dhinaca hore. Dhabarka gadaashiisa waxaan ku leenahay laba kamarad iyo dareeraha faraha.
1 Tilmaamaha Vivo Y3 Standard Edition
Xawaaraha Vivo Y3 Heerka Heerka
Telefoonku wuxuu la yimid a ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo xaddidan gelitaanka. Waxaan helnaa qeexitaanno u eg noocyadan. Iyadoo aan layaab badan laga haynin buuggan 'Vivo Y3 Standard Edition', laakiin si fiican ayuu u qaban doonaa mar walba. Gaar ahaan markay tahay batteriga, waxay naga dhigeysaa inaan dareemo wanaag, mahadnaq batteriga weyn ee kiiskan. Muuqaal ay adeegsadayaal badani u leeyihiin muhiimad weyn. Kuwani waa qeexitaannada buuxa ee taleefankan:
Muuqaal: 6,35-inch LCD oo leh xallinta pixel 1544 x 720
Kaydinta Gudaha: 64 GB (Kordhinta kaarka MicroSD illaa 256 GB)
Kaamirada gadaal: 13 MP oo leh aaladda fur f / 2.2 + 2 MP oo leh aperture f / 2.4
Kaamirada hore: 8 MP oo leh f / 1.8 aperture
Batariga: 5000 mAh oo leh 10W Charge
Nidaamka qalliinka: Android 9 oo leh Funtouch OS 9.1
Isku xirnaanta: 4G LTE, Wi-Fi 4, Bluetooth, Minijack, Micro-USB, GPS, GLONASS
Qaar kale: Akhristaha sawirka faraha iyo aqoonsiga wajiga
Cabirka: 159,43 x 76,77 x 8,92 mm
Miisaan: 191,5 garaam
Bilahaan waxaan aragnay moodello layaableh oo kadhaxeeya soo galida. In kasta oo markan Vivo Y3 Standard Edition uu si dhammaystiran u la kulmayo waxa aan ka helno taleefanka qaybtan ka mid ah suuqan. Markaa waa qaab loo hoggaansamo, oo leh qeexitaanno dheellitiran oo ku dhex jira xaddigiisa. Gaar ahaan wuxuu iftiiminayaa batariga isku mid ah, oo leh awood dhan 5.000 Mah, taasoo na siin doonta ismaamul wanaagsan markasta. Intaa waxaa dheer, waxay ku habboon tahay xamuulka 10W, taas oo ah wax aan caadi ahayn qaybtan suuqan.
Faahfaahin kale oo la yaab leh waa joogitaanka dareeraha faraha. Moodooyin badan oo qaybtan ka mid ah suuqyadan ayaan lahayn dareeraha faraha. Astaantu waxay soo bandhigaysaa aaladda dareeraha ee taleefanka gadaashiisa. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay aqoonsi wajiga ah oo furaya, sidaan aragnay. Sidaas isticmaalayaasha yeelan doonaan hababka furayay laga heli karaa telefoonka xaalad kasta. Bishaaro wanaagsan ayaga, maxaa yeelay waa wax iska caadi ah in inta u dhexeysa xaddidan la gelinayo aysan had iyo jeer jirin xulasho badan oo la heli karo.
Nooca 'Vivo Y3 Standard Edition' wuxuu ka bilaabmayaa Shiinaha si rasmi ah hadda. Taleefanka waxaa lagu bilaabay hal nooc oo RAM ah iyo keydinta, sida aan ku aragnay qeexitaankiisa. Waqtigaan la joogo wax xog ah lagama hayo bilowgeeda caalamiga ah, in kasta oo la arko helitaanka caadiga ah ee taleefannada shirkadda, haddana waxay u egtahay inaysan ka muuqan doonin Yurub. Xaqiiqdii waxay joogi doontaa oo keliya suuqyada ku yaal qaaradda Aasiya.
Noocan kaliya ee taleefanka waxaa lagu qiimeeyaa 999 yuan, taas oo ku saabsan 127 euro in la beddelo. Waxaa lagu heli karaa laba midab, oo ah casaan iyo buluug, oo leh magacyo Jade Red iyo Ink Blue kiiskan. Waxaan arki karnaa inay tahay taleefan si fiican uga dhex shaqeeya qaybtan suuqan. Markaa iyada oo aysan layaab badan lahayn, haddana Vivo Y3 Standard Edition wuxuu si wanaagsan ugu iibin karaa qaybtiisa suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Vivo Y3 Standard Edition: Nooca noocyadiisa cusub ee heerka soo-gelinta
Smartisan Nut Pro 3 waxaa lagu bilaabay kamarad afar geesle ah oo ah 48 MP: ogow astaamaha iyo qiimaheeda